Kedụ ngalaba ọdịnaya kachasị dị na ntanetị na ekwentị? | Martech Zone
Ndị na-ere ahịa ọdịnaya nwere ike ịchọ iburu nke kachasị ọhụrụ AddThis nyocha nke ntinye aka na ọdịnaya na desktọọpụ na ekwentị mkpanaaka. Nnyocha Q3 nke ụlọ ọrụ ahụ kpughere ọnọdụ na omume na-adọrọ mmasị mgbe a bịara n'ihe ndị na-azụ ahịa na-etinyekarị, ebe ha na-etinye, yana oge nke ụbọchị ha nwere ike ịlele ya.
Dabere na AddThis, edemede ọdịnaya ndị hụrụ njikọ aka kachasị na mkpanaka bụ ezinụlọ na ịzụ ụmụ na afọ ime metụtara ọdịnaya na-adọta pasent 187 karịa okporo ụzọ site na ekwentị. Nke a na-esote ụlọ ahịa na 6.3 pasent nke okporo ụzọ na njem na 6.1 pasent nke okporo ụzọ mkpanaka.
N'ihe banyere ọdịnaya mkpanaka, edemede ndị hụrụ njikọta kachasị, dị ka akọwapụtara site na ibe peeji nke otu ụzọ n'ụzọ anọ bụ ezinụlọ na ịzụ ụmụ, njem na mkpọsa. Kpọmkwem, ọdịnaya metụtara afọ ime hụrụ pasent 187 karịa ahịa site na ekwentị mkpanaaka. Ihe nnata ahia nwetara 6.3 pasent nke okporo ụzọ mkpanaka na ọdịnaya njem natara 6.1 pasent nke okporo ụzọ mkpanaka.
Ọ bụ ezie na okporo ụzọ mkpanaka na-aga n'ihu na-ebili - ụlọ ọrụ ahụ kọrọ na okporo ụzọ mkpanaka na netwọkụ ya ejirila nwayọ mụbaa pasent isii kwa ọnwa n'ime ọnwa isii gara aga - enwere ụfọdụ ọdịnaya ọdịnaya ndị ahịa na-elekarị anya na desktọpụ ha. Ndị a gụnyere ego na agụmakwụkwọ onwe onye. Dabere na AddThis, na nkeji nke atọ, ọdịnaya agụmakwụkwọ na-ahụ 74 pasent karịa okporo ụzọ sitere na kọmpụta desktọọpụ na 64 pasent nke okporo ụzọ maka ọdịnaya ego onwe onye mere na desktọọpụ.
Ọzọkwa, nyocha ahụ chọpụtara na oriri nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ihe ndị dị ugbu a ọdịnaya elu n'etiti 5AM na 8AM mgbe ụdị & ejiji na ụdị ntụrụndụ dọtara okporo ụzọ kachasị na etiti abalị isii na etiti abalị.
Na mkpokọta, ụdị ọdịnaya 10 kachasị elu na-akọrọkarị na Weebụ mepere emepe n'oge nke atọ, dị ka AddThis si kwuo, bụ njem, ndọrọ ndọrọ ọchịchị (ọ bụghị ihe ijuanya ebe ọ bụ na anyị na-enwe ntuli aka nke etiti oge), ụlọ, egwuregwu, nri, ahụike, ego, ịke & ejiji, mma nka na mmuta - na iji.
Facebook, Twitter na Facebook nwere mmasị na-anọgide na-arụ ọrụ atọ kachasị elu na nkeji iri na ise. Nyocha a dabere na ihe nchọgharị weebụ 1.7 dị iche iche na-enweghị aha na desktọọpụ na ngwaọrụ 720 nde site na July 1 ruo September 30, 2014.
Tags: 2014tinyeọdịnaya ọdịnayaEducationnjikọ akaegoezi nkànriHealthhomendọrọ ndọrọ ọchịchịq3egwuregwuịke & ejijinjem
Ndị ahịa na-anwa iru gị na Social Media, You nọ ya?